भारत र पाकिस्तानसँग खेल्न एक्साइटेड छौंः पारस खड्का – Merosamaya
लगानी नै नहुँदा त नेपाली क्रिकेट यहाँ छ, लगानी हुँदा कहाँ पुग्थ्याे ?
मेरो समय	 २९ श्रावण २०७५, मंगलवार १३:१३ मा प्रकाशित 846 0
कप्तान खड्कासँग कुराकानी गर्दै पत्रका अमृत सुवेदी
एसिया कप छनोट खेलका लागि बन्द प्रशिक्षण सुरु हुनुअघि नेपाली क्रिकेट टिमका कप्टान पारस खड्का पोखरा थिए । आउँदो कात्तिकमा हुने पोखरा प्रिमियर लिगको प्रचार र क्रिकेट मैदान अवलोकन गर्न खड्का पोखरा आएका थिए ।
मलेसियामा २९ अगस्टदेखि हुने एसिया कप छनोटका लागि मंगलबारदेखि बन्द प्रशिक्षण हुँदैछ । छनोट खेलको विजेता बनेर भारत, पाकिस्तानजस्ता क्रिकेटका शक्तिशाली देशसँग खेल्ने मौका नेपालले कुनै पनि हालतमा गुम्न नदिने कप्तान खड्का बताउँछन् ।
हङकङ, युएई, सिंगापुर, ओमान र मलेसिया सबैलाई हराएर एसिया कप खेल्ने सपना देखिरहेको नेपाली टिमले तयारी कसरी गरिरहेको छ त ? अगाडि सुनौलो अवसर पाइरहेको नेपाली क्रिकेटले के, कस्तो परिस्थितिबाट गुज्रियो र भविष्य के देखिरहेको छ ? यस्तै विषयमा नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्कासँग अमृत सुवेदीले कुराकानी गरेका छन् ।
अगस्ट २९ देखि मलेसियामा एसिया छनोट कप हुँदैछ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ, तयारी कस्तो छ ?
यो हाम्रो लागि सुनौलो मौका हो । भारत र पाकिस्तानजस्तो देशसँग खेल्न पाउने मौका छ हामीसँग । हामी खेलाडीले गर्न सक्ने भनेको निरन्तरको प्रयास हो । जिऊ, ज्यान लगाएर प्रयास गर्नेछौं । खेलाडीको लागि सुनौलो अवसर हो, देशको लागि पनि एउटा प्लाट फर्म हो । अब यस्ता अवसरहरु आइ नै रहने छन् । एसिया कप खेल्ने मौका छ । हामी कसैगरी यो मौका गुमाउन चाहन्नौं ।
एसिया कप खेल्ने सपना पूरा गर्न बिजेता हुनै पर्ने बाध्यता छ । युएईसँग हुने एक दिवसीय र अरु ४ देशसँगको म्याचलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सबै टिमहरु राम्रा छन् । डिभिजन टु, थ्रिमा हुँदा हामीले हराएका टिम पनि छन् । ओमन राम्रो टिम हो तर उसलाई पनि हामीले डिभिजन टुमा हुँदा हराएका हौं । यो टिम, त्यो टिम भन्नुभन्दा पनि सबै टिम राम्रा छन् । त्यसैले हामीलाई त्यति सजिलो चाहिँ हुने छैन । किनकी उनहरुसँग पनि त्यही जोस, सोंचका साथ आएका हुन्छन् र एसिया कपको सपना देखेका हुन्छन् । हामीले बेस्ट खेल्नेछौं ।
एक दिवसीय मान्यता प्राप्त गरी नेदल्यान्डलाई दुई खेलमा एक सिरिज जितेर फर्किँदै गर्दा नेपाली क्रिकेटलाई हेर्ने नजर कस्तो पाउनुभयो । नेपाली क्रिकेटमा लगानी र व्यवस्थापन गति नहुँदा पनि उपलब्धि प्राप्त हुँदा यहाँको मनमा के खड्किरहेको थियो, के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो ?
बिना लगानी नेपाली क्रिकेट यहाँ आइपुग्यो भने लगानी गरे कहाँ पुग्ला ? खेलाडीहरुमाथि लगानी गर्नुप¥यो, प्रशिक्षकमाथि लगानी गर्नुप¥यो । भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुप¥यो । जहाँ क्रिकेट बढी खेलिन्छ अझै व्यवस्थित गर्नुप¥यो । नयाँलाई क्रिकेट खेल्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुप¥यो । हामीले माहोल बढाउनुप¥यो । हामीले निरन्तर रुपमा कोसिस गरेकागरै छौं, टिमलाई कसरी जताउने, कसरी माथि जाने भनेर । नेपाली क्रिकेटलाई अरु राष्ट्रले हेरिरहेका छन् । हामी दुनियाँलाई देखाउन चाहान्छौं । नेपाली क्रिकेटको भविष्य उज्ज्वल देखेको छु ।
हामीले जे छ त्यसैमा सन्तोष मानेर खेलिरहेका छौं । क्रिकेट मन परेर खेल्यौं, देशका लागि जित्छौं भनेर खेल्यौं । हामीले नेपाली क्रिकेटको भविष्यको सपना देखिरह्यौं । सपना देख्दै जाँदा आज हामी उभिने त भयौं नि । केही पनि छैन भनेर बसेको भए, कहीँ पनि पुग्ने थिएनौं ।
हामीले पाएको मान्यतालाई जोगाउनु पर्ने छ । राज्यका तर्फबाट क्रिकेटलाई प्राथमिकतामा राखिएकै थिएन । जब हामी २०१४ मा ट्वन्टी–२० विश्वकप खेल्यौं तब क्रिकेटलाई हेर्ने नजर नै परिवर्तन भयो । म जहिले पनि एक्साइटेड हुनुपर्छ भन्छु । अहिले त झन् माहोल बनिरहेको छ । यसले हामीलाई उत्साहीत बनाएको छ । सायद हामीलाईजस्तै अरुलाई पनि उत्साहीत बनाएको होला ।
नेपाली क्रिकेट क्षेत्रमा आजको विन्दुमा उभिएर भोलीको यात्रा र हिजो हिँडेको बाटो कसरी हेर्नुभएको छ ?
म एउटा खेलाडी हुँ । उत्साही छु । खुसी छु । चुनौति र जिम्मेवारी बढेको छ । म, मेरो पुस्ता र मभन्दा अगाडिका खेलाडीहरुको पनि वान डे इन्टरनेसनल (ओडिआई) खेल्ने राष्ट्र बन्ने सपना थियो । अथक प्रयास र मिहिनेतले हामीले त्यो मान्यता पायौं । यसले नेपाली क्रिकेटको ऐतिहासिक बाटो खुलेको छ । हिजो वल्र्ड क्रिकेट लिगको डिभिजन फोरबाट हारियो भने, डिभिजन थ्रिबाट हारियो भने के गर्ने ? जित्यो भने के गर्ने ? भन्दाभन्दै आज यहाँ आइपुगेका हौं । आज ससांरका जुनसुकै क्रिकेट खेल्ने राष्ट्रसँग एक दिवसीय खेल्ने योग्यता छ । हामी एक्साइटेड छौं । अब हामी यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौं र कसरी अगाडि बढ्छौं भन्ने कुरा हो । नेपाली क्रिकेटलाई फर्केर हेर्दा विभिन्न आरोह–अवरोह पार गरेका छौं । दुखम्, सुखम् मिलेर यहाँसम्म आउन सकेका हौं ।
क्रिकेटप्रतिको चासो बढेको छ । धेरै कुरामा परिवर्तन आएको छ । जुन गतिमा खेलाडीहरुले प्रदर्शन गर्दै गए, महिला क्रिकेट, अन्डर सेभेन्टिन, एट्टिन क्रमश भए । खेल बढ्दै गयो, त्यही हिसाबले व्यवस्थापन बढ्न सकेन । नेपाली क्रिकेटले राम्रो प्रदर्शन गर्दै गर्दा पनि व्यवस्थापन पक्ष राम्रो भएन । त्यो एउटा दुखदायी पक्ष हो । हिजैदेखि नेपाली क्रिकेट व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढेको भए आज यहाँ थुप्रै क्रिकेट मैदानहरु हुन्थे, प्रत्येक मैदानमा विभिन्न खाले म्याच भइरहेका हुन्थे होलान् । भौतिक पूर्वाधारयुक्त हुन्थ्यौं होला हामी ।
अहिले हामीसँग एउटा मात्र क्रिकेट मैदान छ, टियुको । पुलचोकमा थियो, त्यो खेल्ने अवस्थामा छैन । हामीले स्टेडियमकोमात्र कुरा गरिरहेका हुन्छौं, त्योभन्दा पहिले खेल मैदान चाहिन्छ । हिजो के भयो भन्नुभन्दा पनि अब हामी के गर्न सक्छौं, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
अब हामीलाई नयाँ मौका छ । क्रिकेट संघ विवाद हटाउँदै कमिटी पनि बनेको छ । यो कमिटीले चुनाव गराएर छिट्टै व्यवस्थित क्रिकेट बोर्ड बन्छ भन्नेमा आशावादी छौं ।
क्यानको विवाद सुल्झिँदै निलम्बन फुकुवाको प्रक्रियामा छ । क्यानको विवाद र निलम्बनका कारण कठिन परिस्थितिबाट गुज्रनुपर्‍यो । क्यानप्रति अब कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
क्यान विवाद र निलम्बनका बेला एकदमै दुखदायी परिस्थिति थियो । कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिँदै यहाँसम्म आइपुग्यौं । समस्या अझै सुल्झिएको छैन, आशावादी त छौं तर यसै भन्ने अवस्था छैन । नेपाली क्रिकेटको विकास ठप्पै भएको छ । खेलाडीका लागि कुनै फन्डिङ आएको छैन । १८ महिना भयो खेलाडीहरुले कन्ट्र्याकको तलबबाहेक केही पाइएको छैन । केबल टुर जाने, खेल्ने, आउनेमात्रै भएको छ । यसले विकासलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ । सायद अब दुई वा साढे २ वर्ष यो लर्निङ भनौ या सिक्नुपर्ने पाठको रुपमा यसलाई लिनुपर्छ ।
गल्ती भए होलान् खेलाडीबाट, व्यवस्थापनबाट, प्रशिक्षकबाट र यससँग सम्बन्धित जति पनि मान्छेहरुबाट । तर, कसले के ग¥यो, कसले के गरेन भन्ने बिर्सिएर जानुपर्ने बेला आएको छ । अब चाहिँ जुन नयाँ विधान बनेको छ त्यसै अनुरुप जिल्लादेखि नै चुनाव गराएर जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्म आउँदा एउटा क्रिकेट बोर्ड बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अब जो पनि आउनुहुन्छ जिम्मेवार मान्छे आउनुहुन्छ । अब जिम्मेवारी नलिए कहिले लिने त ? खेलाडीहरु निरन्तर रुपमा लागिरहेका छौं । जोस, जाँगरका साथ हामी लागिरहेका छौं, व्यवस्थापनबाट पनि त्यही जोस र जाँगर चाहियो । हिजोका सबै कमजोरीहरुलाई, गल्तीहरुलाई बिर्सेर अगाडि बढ्ने बेला आइसकेको छ ।
कात्तिकमा हुने भनिएको पोखरा प्रिमियर लिगको सन्दर्भमा यहाँ पोखरा आउनुभएको छ । र यो नेपालकै ठूलो राशीको लिग हुने बताइएको छ । यस्ता लिग हुन थाल्नु नेपाली क्रिकेटको शुभ संकेत हो ?
नेसनल÷इन्टरनेसनल २÷३ वटा प्राइभेट लिग नेपालमा भइरहेका छन् । अगामी दिनमा चाहिँ ट्वान्टी–२० होलान् । यदी भोली क्रिकेट बोर्ड आउँछ अनि ५० ओभरको टु डेज, थ्रि डेजको फम्र्याटमा पनि हामी जानै पर्छ । पोखरा प्रिमियरजस्ता टुर्नामेन्टले चाहिँ एउटा क्रिकेटको माहोल बनाउँछ । यसले थप ऊर्जा थपिने छ ।
विभिन्न देश–विदेशका खेलाडी, प्रशिक्षण आउँदा यहाँका खेलाडी, प्रशिक्षक र दर्शकका लागि पनि त्यो एउटा मौका हुने छ । अनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पोखराका बारे छुट्टै सन्देश दिन्छ । मलाई लाग्छ नेपालकै धेरै पर्यटक आउने ठाउँमध्येको पोखरा हो । यो ठाउँमा क्रिकेट हुँदा स्पोर्ट टुरिजमको पनि विकास गर्छ । यस्ता लिगहरु हुनु पक्कै पनि नेपाली क्रिकेटमा शुभ संकेत हो र यस्ता टुर्नामेन्टहरु भइरहनुपर्छ ।
यस्ता लिगहरुले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । आज पोखरा प्रिमियर लिग भयो, भोली धनगडी प्रिमियर लिग हुन्छ, पर्सी जनकपुर प्रिमियर लिग हुन्छ, अर्को काठमाडौं प्रिमियर लिग होला । यसले खेलाडीहरु बिजी हुन्छन् । सबै जना जोडिन्छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा हो ।
नयाँ पुस्ता जन्माउने गरी प्रयाप्त एकेडेमी खुलेका छैनन्, सरकारीस्तरबाट त्यो खालको लगानी अझै भइसकेको छैन । त्यस्ता प्रतियोगिताहरु पनि भइरहेका छैनन् भने नयाँ पुस्ता कसरी जन्मिरहेका छन् ?
पछिल्लो पुस्ता झन् ट्यालेन्ट निस्किरहेका छन् । जस्तैः सन्दीप लामिछानेलाई हेर्न सक्नुहुन्छ । ३÷४ वर्ष अगाडि सन्दीप भाइ कहाँ थिए, कस्तो अवस्थामा थिए र अहिले उसले संसारका प्रतिष्ठित लिगहरु खेलिरहेका छन् । सबैले उसलाई अहिले नेपालको खेलाडी भनेर चिन्छन् । हाम्रा खेलाडीलाई प्लाट फर्मको कमी थियो, त्यो पनि पूरा हुँदै गइरहेको छ । जब राम्रा खेलाडी जन्मदै जान्छन्, विश्वका आँखा पर्छन् ।
जिल्ला, क्षेत्र र प्रदेश क्रिकेट संघ जब सक्रिय हुनेछन्, तब नयाँ पुस्ता जन्माउने र प्लाट फर्म दिने काम गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ । जब क्रिकेट बोर्ड बन्छ, त्यसमा हरेक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुन्छ । हाम्रा संघहरुमा कामभन्दा बढी बोल्ने ज्यादा हुन्छ । काम गर्नेमान्छेहरुले काम गरिरहेका छन् । आज सुवास शाहीहरुले प्रिमियर लिग गराएर धनगडीलाई चिनाएको छ । हामीले गरेको खै त ?
राजा महेन्द्रले बनाउन थालेको शिशुवा–पोल्याङटार सडकः ६३ वर्षपछि पिच हुँदै
नेकपा एकता सकस: गण्डकीमा भएन सर्वसम्मत, (हेर्नुहाेस् कुन जिल्लाबाट को–को परे सिफारिसमा)